‘लिलिबिलि’ को घोषणा , के पत्रकार बाटै असुरक्षित छन् प्रदिप ? | kollywood Update
‘लिलिबिलि’ को घोषणा , के पत्रकार बाटै असुरक्षित छन् प्रदिप ?
भाद्र २७ , कलिउड अपडेट ।
मंगलबार राजधानिको अन्नपूर्ण होटलमा चलचित्र ‘लिलिबिलि’ को घोषणा गरियो । मिलन चाम्सको निर्देशन रहने चलचित्र लिलिबिलि मा दुइ नायीका जसिता गुरुङ र जेबिका गुरुङ माझ नायक प्रदिप खड्का देखिए । बजारमा हल्ला चले अनुसार नै लिलिबिलिमा नायक प्रदिप खड्का अनुबन्धित भएका छन् । लिलिबिलिको टिम र स्कृप्टको कारण फिल्म साइन गरेको प्रदिप बताउछन् ।
यो चलचित्रबाट नायक प्रदिप खड्का ले २२लाख पारिश्रमिक लिएको साथै बर्मा र थाइल्याण्डको राइट्स पनि लिएको बुझिएको छ । नयाँ बर्षमा रिलिज गर्ने लक्ष्य राखिएको यो चलचित्र साढे २ करोडमा निर्माण हुने बताइएको छ ।
लिलिबिलिको घोषणा कार्यक्रममा २-२ जना बडिगार्ड सहित नायीका स्टेज चढे भने नायक खड्का ४ जना बडिगार्ड सहित स्टेज चढे । हल मा तथा भिडभाडमा बडिगार्ड हुनु स्वभाबिक नै हाे तर सिमित पत्रकार मात्र भएको स्थानमा पनि संगसंगै बडिगार्ड हुनुमा आवश्यकता भन्दा बढि देखाइएको हो कि भन्ने चाहि लाग्न सक्छ ।
बडिगार्ड नायक नायीकाको सुरक्षाको लागि खटाइन्छ तर सिमित पत्रकार मात्र भएको कार्यक्रममा यस्तो देखिदा नायक नायीका पत्रकार बाट असुरक्षित छन् भन्ने अर्थ पनि लाग्छ । देखावटि हो या आवश्यकता यो बिषय चाहि निर्माण यूनिटलाइ नै थाहा होला । के अव नायक प्रदिप खड्का जहाँ जाँदा पनि बडिगार्ड लिएर हिड्लान् त ? यो प्रश्न सर्वत्र फैलिएको छ ।
तस्विर श्रोत : अनलाइन खबर